အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလားအလာများသည်ကိုကင်းဆေးစွဲသူများအတွက်ကိုကင်း၏ဆက်စပ်မှုနှင့်ဆိုင်သောဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည် (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
Psychopharmacology (Berl) ။ 2004 Dec;177(1-2):121-9.
ဗန်က de Laar MC1, Licht R ကို, Franken ih, Hendrik VM က.
စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုနှင့်၎င်း၏အခြေခံအကျိုးသက်ရောက်စေ-ဆက်စပ်ပြည်နယ်များပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးများရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေအရင်အဦးနေရာသောအဓိကယန္တရားဖြစ်ကြသည်။
ကိုကင်းတွေကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်စိတ်ပိုင်းစနစ်ကအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERP) တိုင်းတာအလုပ်သမားပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဖြစ်စေမရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။
ERPs တိုကျရိုကျ, parietal နှင့် midline က်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်နေတုန်းကင်း-စွဲဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကြားနေနှင့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်ရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။
ဒီသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဘာသာရပ်များအတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့နေတုန်းလူနာ, N300 များအတွက်ကြားနေနှင့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်ရုပ်ပုံများအကြား ERP လွှဲခွင်ကှာဟပြနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောလှိုင်း (LSPW) နှေးကွေးခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောအပြုသဘောဆောင်သည့်လှိုင်း (SSPW) ထောကျ။ ကြားနေနှင့်ကိုကင်း cue-evoked ERP လှိုင်းတံပိုးအတွက်ကွာခြားချက်များလည်းသာလူနာအုပ်စု LSPW နှင့် SSPW များအတွက်လက်ဝဲတိုကျရိုကျက်ဘ်ဆိုက်များမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအုပျစု-တိကျတဲ့ cue-evoked ERP amplitude parietal နှင့် midline က်ဘ်ဆိုက်များမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းတွေကိုကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုသွေးဆောင်သောယူဆချက်အတည်ပြုပါ။ ဒါဟာလက်ဝဲတိုကျရိုကျက်ဘ်ဆိုက်များအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်လှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ယူဆနေကြသည်ကတည်းကကိုကင်းတွေကိုထိတွေ့ထားတဲ့အစာစားချင်စိတ်စိတ်ပိုင်း system ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု ERP ၏ sensitivity ကိုကိုကင်းတွေကိုအဘို့ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမူးယစ်ဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်ပေးပါသည်။